Home – EasyDevBoards
Dot Product ကို အောက်ပါ အခြေအနေတွေမှာ သုံးလို့ရတယ်။ ၁) Vectors ၂ ခုက ထောင့်မှန်ကျနေသလား? Dot Product လုပ်ရင် အဖြေက ၀(zero) ထွက်လာပါမယ်။ မထွက်ရင် ထောင်မှန် မကျဘူးလို့ ...
First Global Robotic ပြိုင်ပွဲက မကြာခင်က ပြီးသွားခဲ့ပါပြီး။ မြန်မာ အသင်း ကအ အဆင့် ၆ ရရှိခဲ့ပါသည်။ First Global ပြိုင်ပွဲမှာ ဘာတွေ သုံးခဲ့ သလဲ သိချင်ကြမှာပါ။ First ...
မြန်မာနိုင်ငံထုတ် ပစ္စည်းတော်တော်များများဟာ Transformerless Power Supply (TPS) Design ကို အသုံးပြုကြတာ သတိထားမိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဘုရားမီးတွေက အစပေါ့။ သို့သော် TPS Design တွေမှာ အားနည်းချက်တော်တော်များများ ရှိသလို အန္တရာယ်လည်း ...
Etcher isagraphical SD card writing tool that works on Mac OS, Linux and Windows, and is the easiest ...
CIRCUITMAKER JUNE 2017 DESIGN CONTEST ကို Circuit Maker နှင့် Seeed Studio တို့ ပူးပေါင်းပြီး ကျင်းပနေပါသည်။ ပြိုင်ပွဲ အပြည့် အစုံကို အောက်ပါ လင့် မှာ ...
Programming Language တခုလေ့လာပြီးဆိုလျှင် ဘယ်လို တတ်မြောက်အောင် လေ့လာမှာလဲ? သူများ ရေးထားတာကို အမြဲတမ်း ကူးသာ နေရတယ် ဘာမှန်း မသိဖြစ်နေသလား? ထည့်စဥ်းစားရပါမယ်။ ဘယ် ဘာသာ စကား ကို လေ့လာ လေ့လာ ...
www.arduino.cc မှ တဆင့် Arduino Tutorial များကို ဖတ်ရှုရန် ခက်ခဲသူများအတွက် pdf version ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့ရအောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ [do_widget id=text-12] [tx_button style="default" text="Download Here..." url="http://www.easydevboards.com/wp-content/uploads/2016/05/Arduino-Tutorials.pdf" ...